विषेश क्यारेक्टरहरू घुसाउँदा
विशेष क्यारेक्टरहरू घुसाउँदा
यो कार्यले तपाईँलाई विशेष क्यारेक्टरहरू घुसाउन समर्थन दिन्छ, जस्तै: जाँच चिन्हहरू,बाकसहरू र टेलिफोन प्रतीकहरू तपाईँको पाठ भित्र घुसाउनलाई समर्थन गर्दछ।
In any text input field (such as the input fields in the Find&Replace dialog) you can press Shift+Command Ctrl+S to call the Special Characters dialog.
अहिलेको अवस्थामा कुञ्जीपाटी बाट उच्चारणहरू सँग अक्षरहरू प्रविष्टि गर्ने तिन वटा तरीकाहरू छन।
सन सोलारिस: सन कुञ्जीपाटी प्रयोग गर्दा। पहिले खालीस्थान पट्टीको दायाँ तिर कम्पोज कुञ्जी थिच्नुहोस ,त्यसपछि पहिलो र दोस्रो परिमार्जक प्रविष्टि गर्नुहोस।
Linux / NetBSD: मृत-कुञ्जीहरू प्रयोग गर्दा। एउटा xterm सञ्झ्याल भित्र पहिले (´) वा (`) थिच्नुहोस। क्यारेक्टर पर्दामा देखिनु पर्देन। अव एउटा अक्षर थिच्नुहोस जस्तै: "e" ।eलाई एउटा उच्चारण दिइएको छ,é वा è । यदि छैन भने XF86Config फाइलमा एउटा "nodeadkeys" XkbdVariant लोड गरिएको छ र यसलाई प्रतिस्थापन गरेको छ कि भन्ने कुरा जाँच गर्नुहोस। तपाईँले परिवेश चल SAL_NO_DEADKEYS चयन गर्नुभएको हुन सक्छ जस्ले मृत-कुञ्जीहरूलाई निस्क्रिय पार्दछ।
सबै युनिक्स प्रणालीहरू: (Alt ग्राफ) थप कम्पोज कुञ्जीको रूपमा । यदि तपाईँले परिवेश चल SAL_ALTGR_COMPOSE सेट गर्नुभएमा, (Alt ग्राफ) कुञ्जीले LibreOffice मा कम्पोज कुञ्जीले जस्तै काम गर्दछ। (Alt ग्राफ) कुञ्जीले एउटा mode_switch ट्रिगर गर्ने पर्छ, ताकी उदाहरणका लागि,xmodmap -e "keysym Alt_R = Mode_switch" सेट गर्ने पर्दछ। पहिले (Alt ग्राफ) थिच्नुहोस ,त्यसपछी पहिलो परिमार्जकलाई त्यसपछि दोस्रो परिमार्जकलाई थिच्नुहोस। क्यारेक्टरहरू file /usr/openwin/include/X11/Suncompose.h. भित्र सोलारिस प्रणालीमा वर्णन गरिए जस्तै संयोजन गरिन्छन।
Title is: विषेश क्यारेक्टरहरू घुसाउँदा